Gịnị bụ nkwado ọdịnaya? Kedụ ka ị ga - esi bulite ntụnye ọdịnaya maka akara aka maka usoro ịka mma site na ọnụego? | Martech Zone
Gịnị bụ nkwado ọdịnaya? Kedụ ka ị ga - esi bulite ntụnye ọdịnaya maka akara aka maka usoro ịka mma site na ọnụego?
Monday, November 24, 2014 Monday, November 24, 2014 Douglas Karr
Otu ụzọ esi aga n’ihu n’ịkwalite saịtị anyị ma gbasaa iru anyị bụ site na iji ọdịnaya ndị akwadoro. Anyị malitere iji otu onye na-ere ahịa mana mgbe ha na-agba ọsọ mgbasa ozi anyị na mgbakwunye $ 10k - wee rịọ anyị maka ya wee rịọ ka anyị kwụọ ha ụgwọ - anyị kpọrọ ya kwụsị. Anyị kwagara Taboola ma nwee nsonaazụ kachasị mma site na iji ohere kesaa ndị na-ege anyị ntị na mba (yana iji ọnụego pịa-site na ọnụego ọnụego).
Enwere ihe karịrị 5M nke ọdịnaya dị ugbu a na-akwalite site na ikpo okwu nyocha ọdịnaya anyị, na ọtụtụ puku ụdị na-agba mkpọsa ọdịnaya. Okwesiri ikwu na anyi huru ya nke oma, ma n'uzo anyi mutara ihe ma obu abuo banyere ihe n’eme ndi mmadu pịa ma tinye aka n’elu ikpo okwu anyi. Taboola
Gịnị bụ nkwado ọdịnaya
Ọtụtụ ụlọ ahịa na-agbagha nwa afọ mgbasa ozi na nkwado nkwado ọdịnaya. Nkwado ọdịnaya dị ezigbo iche, ọ bụkarị ọdịnaya nke dị n'okpuru isiokwu e bipụtara nke nwere isiokwu dị mkpa site na isiokwu. Contentlọ ọrụ ọdịnaya a kwadoro, dị ka Taboola, na-enyocha ọdịnaya e bipụtara iji mepụta egwuregwu kachasị mma na nsonaazụ iji nweta ọnụ ọgụgụ dị elu site na ọnụego. Ekwenyere m na ike kasịnụ nke ọdịnaya akwadoro bụ ike ya iji chọpụta ọdịnaya gị.
Etu esi abawanye Pịa-Site na Ọnụego na Ọdịnaya Nkwado
Taboola etinyela ihe omuma a iji nyere gi aka ime ka ọdịnaya gi kwadoro - site na ịbịaru aha mkpado aha gi na udi thumbnails ma obu ihe onyonyo i gosiputara. Iji ngwa ngwa emere nke a na-agwa ndị na-ege gị ntị na ihe onyonyo a na-ahụ anya nke ọma na obere usoro dị oke egwu.
Tags: nkwado ọdịnayataboola
Vidio: Bido Storelọ Ahịa Ecommerce gị na ọkara awa